देशैभरी शाखा विस्तार गर्ने योजनामा छौ
बिहीवार, श्रावन २७, २०७३
नेपाली बजारमा आफ्नो छुट्टै ब्राण्डको रुपमा स्थापित कोसेली जुत्ता अहिले आम मानिसको रोजाईमा पर्न सफल भएको छ । काठमाडौ उपत्यकामा पाँच ठाँउमा आउटलेट राखी व्यवसाय गरेरहेको यस कम्पनीले निकट भविष्यमै अन्य पाँच ठाँउमा आउटलेट खोल्ने योजनाका साथ अगाडी बढिरहेको छ । सिल्बर जुब्ली मनाईरहेको यस कम्पनीको बारेमा कम्पनीका अध्यक्ष रविन कुमार श्रेष्ठसँग अखबार नेपाल डटकमका लागि नेपोलियन चेपाङसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
– कोसेली ब्राण्डको जुत्ताले बजारमा कत्तिको बजार लिएको छ ?
निश्चय रुपमा नेपालको बजारको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो बजार धेरै सानो छ । तथापी हामीले बर्षौदेखि विदेशमा उत्पादित समान प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले आफ्नै देशमा केही गरांै भन्ने उद्देश्यका साथ यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थियौ । अहिले यो उद्योग २५ वर्षमा हिडिरहेको छ । अहिलेसम्मको बजारको अवस्था हेर्दा समग्रमा राम्रै देखिएको छ भनौ । उद्योग सञ्चालन सुरु गर्दा नै बजारको अध्ययन गरेकोले र नेपालीभूमिमै उत्पादन गरेको सामानले गर्दा आम नेपली उपभोक्ताले हामीलाई साथ दिनुभएको हो भन्ने लाग्छ । अर्को भनेको हामी सामानको गुणस्तरमा कुनै कसुर बाँकी नराखी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको हिसाबले अगाडि बडिरहेका छौ । यसैकारण पनि हामी नेपाली बजारमा सजिलै भिज्न सकिरहेको हो भन्ने लाग्छ । अहिलेको बजारबाट हामी सन्तुष्ट नै छौ ।
– कुन बर्गका ग्राहकले तपाईहरुको प्रोडक्ट मन पराएका छन् ?
हामीले अहिले बजारमा पठाएका प्रोडक्टहरु सबै वर्गका उपभोक्ताहरुले मन पराईदिनुभएको छ । तथापी हाम्रो प्रोडक्टलाई उच्च घरानाका उपभोत्ताहरु माझ पस्किनको लागि मैले स्यम्पलिङको काम अगाडी बढाईरहेको छु । हामीले निकट भविष्यमा नै लक्षित वर्गको रुची अनुसार मार्केटमा सामान पठाउने छौ । अहिले हामी यसैमा केन्द्रित भएर लागिरहेका छौ । छालाको जुत्ता विदेशी ब्राण्ड मात्रै खोज्ने वर्गलाई समेट्ने गरी छिट्टै हामीले त्यो खालको सामान निकासी गर्ने अन्तिम चरणमा तदारुकताका साथ काम भईरहेको छ ।
– तपाईहरुको आफ्नै शोरुम पनि छ होईन ?
हो हाम्रो आफ्नै शोरुम पनि रहेको छ । हामीले विभिन्न जुत्ता उत्पादक साथीहरुको कम्पनी मिलेर काठमाडौको जमलमा नेपाली जुत्ता घर सञ्चालनमा ल्याएका छौ । त्यो एक करोड २० लाख लगानीमा खोलिएको हो । त्यहाँ म्यानेजिङदेखि सम्पूर्ण कार्यमा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिलाई हामीले राखेका छौ । यसमा शेयर होल्डरहरु मध्येबाट हरेक दुई वर्षमा अध्यक्ष चेन्ज हुने गरी व्यवस्था मिलाएका छौ । उपत्यकामा अहिले हामीले जमल, कुमारीपाटी, पुल्चोक, नारायणगोपाल चोक, बालाजु गरी ५ ठाउँमा आउटलेट राखेका छौ । यस्तै यसलाई देशैभरी अउटलेट विस्तार गर्ने गरी काम अगाडी पनि बढिरहेको छ ।
– विदेशमा पनि शाखा विस्तारको योजना छ की ?
हो हामीले कोसेली ब्राण्डको जुत्तालाई विदेशमा पनि निर्यातको योजना बनाईरहेका छौ । यसको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भईरहेको छ । निकट भविष्यमै जापानमा यस जुत्ताको शोरुम खोल्ने छौ ।
– तपाईहरुको कम्पनीमा अहिले कति जनाले रोजगारी पाईरहेका छन् ?
अहिले हामीले ९० जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिईरहेका छौ । हामीले रोजगारी दिने मात्र होईन एकल महिला, दलित उत्पिडनमा परेका, पिछडिएका व्यक्तिलाई तालिम समेत दिएका छौ । तालिम सँगसँगै रोजगारीको ग्यारेन्टी गराई अहिले रोजगारी पनि उपलब्ध गराएका छौ । यसको मतलव हामी व्यवसाय मात्र नगरी समाज रुपान्तरणका लागि पनि केही कार्य गरिरहेका छौ भन्ने हो । हामीले जुत्ता बनाउने तालिम मात्र नदिई दैनिक रु १०० भत्ता पनि दिएर सिकाएका छौ । अरुले तालिम दिदा पैसा असुल्छन् हामीले त उल्टो दिएका छौ । त्यसरी तालिम गरेका सबैलाई हामीले रोजगारी पनि दिएका छौ । उनीहरु कोही पनि बेरोजगार हुनुपरेको छैन ।
– नेपाल सरकारबाट कस्तो सहयोग पाईरहनुभएको छ ?
नेपाल सरकारले राम्रै रेस्पोन्स गरिरहेको छ भनौ । हामीले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय औद्योगिक व्यवसाय रणनीति लागु गराउनको निम्ति लागि परेका छौ । यसको मतलव जुत्ताको पनि ट्रेनिङ ईनस्टिच्युट खोल्ने प्रस्ताव गरेका हौ । त्यसमा नेपाल सरकार सकारात्मक नै छ । तर कुरो के हो भने सरकार परिवर्तन भईरहने हुनाले त्यसलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अलि ढिलाई भैरहेको छ । अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्दा नै तीन पटक मन्त्री चेन्ज भईसकेको छ । अब फेरी को आउने हो थाहा छैन । तर पनि हामीले हाम्रो अभियानलाई जारी नै राखेका छौ । अब व्युरोक्याट मार्फत काम गर्दा अगाडि बढ्न सजिलो होला भनेर त्यता पट्टी केन्द्रित भईरहेका छौ । आशा गरौ निकट भविष्यमा नै हामीले त्यो सफलता हात पाउँछौ होला ।
– कच्चा पदार्थ कहाँबाट आयात गर्नुहुन्छ ?
हामीले ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालबाटै पाईरहेका छौ । अरु त विदेशबाटै मगाउने हो । जबसम्म नेपालमा छाला बेगरको मासु खाईदैन तबसम्म जुत्ता बनाउनका निम्ति चाहिने कच्चा पदार्थ अन्य देशबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि आम मानिसलाई सचेतना जगाउनुपर्ने पनि हुन्छ । नत्र यो समस्या निरन्तर रहिरहन्छ । जुत्ताको सोल भने हामीले पहिलेदेखि उत्पादन गरिरहेका छौ । त्यो चाही हामीले आफ्नो कम्पनीमा मात्र नभई अन्य कम्पनीलाई समेत निर्यात गरिरहेका छौ ।